RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta England Ee FA-ga Oo Mourinho Ka Dalbaday In Uu Faah Faahin Ka Bixiyo Hadalo Uu Saxaafada Ka Sheegay. – GOOL.NET-HOYGA CIYAARAHA
Xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ka dalbaday in uu faah faahin dheeraad ah ka bixiyo hadalo uu ka sheegay shirkiisii jaraa’id ee ka horeeyay kulankii Manchester Derby ee Old Trafford ka dhacay axadii kaas oo ay Manchester City guul 2-1 ah ku gaadhay.
Jose Mourinho ayaa biyo kulul ugu dhex jira hadalo uu ku weeraray ciyaartoyda Manchester City kuwaas oo uu ku eedeeyay in ay sida dabaysa u dhacaan wuxuuna sidoo kale Man City ku eedeeyay in ay isticmalaan tatiko qalad ah laakiin xidhiidhka kubbada cagta ee FA-ga ayaa war saxaafadeed ku sheegay in Mourinho sharaxaad laga doonayo.
Hadalada Mourinho lagu haysto waxaa ka mid ah: “Waxa ay heystaan ciyaartoy cajiib ah, waxa ay heystaan tababare fantastik ah, waxyaabo badan oo fiican ayay heystaan.Haddii aad i weydiisid hal sheey oo aan jecleyn oo ay leeyihiin waxa ay tahay in ciyaartoydooda ay si sahlan ku dhumiyaan isku dheelitirnaantooda.Dabeyl yar haddii ay timaado dhulka ayay ku dhacayaan.”
War saxaafadeedka FA-ga ka soo baxay ee Mourinho looga dalbaday in uu sharaxaad ka bixyo erayadii uu saxaafada ka sheegay ayaa lagu yidhi: “FA-gu waxay Jose Mourinho ka dalbadeen in uu sharaxaad ka bixiyo hadaladii uu saxaafada ka sheegay jimcihii December 8 ee ka hor kulankii axadii Manchester City”.
Waxaana Jose Mourinho loo qabtay maalinta isniinta ee December 18 markaas oo kadib go’aan laga gaadhi doono haddii uu ciqaab ku mari doono hadaladan waxaana qoraalka FA-ga la raaciyay: “Isagu si uu uga soo jawaabo waxa uu haystaa ilaa isniinta December 18 marka ay saacadu tahay 6:00 PM”.